Elevator Escalator mpanamboatra tsipika famokarana - China Elevator Escalator Fitaovana famokarana andalana mpamokatra & orinasa
Ny The Basic Principle Escalator dia karazana fitaovana mitohy mitohy izay amina rantsan-tariby manana endrika manokana sy ny fehikibo momba ny rafitra manokana. Manana tombony maro izy toy ny fahaiza-mitondra fitaterana be, ny fitaterana tsy tapaka. Noho izany ny fepetra takian'ny fiarovana dia avo noho ny fitaovana hafa. Ampiasaina amina toerana be olona sy ny fahitana olona be dia be, toy ny toeram-pivarotana fivarotana, fikambanana, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina sy wharf. Fanamboarana Ny fiara lehibe no ...
High precision, center afovoan'ny gravity, flabilite avo lenta. Ny fampiasana ny fandrefesana lava be sy ny refy U-endriny dia mahatonga ny data ho marina kokoa. Ny motera gantry dia fehezin'ny motera servo Japoney Panasonic, miaraka amin'ny fitoniana avo kokoa. Mampiasa ny rafitra fanamafisana i Keyence, tontolon'ny fanaraha-mason'ny efijery indostrialy, ny hetsika dia tsotra ary azo antoka kokoa. Ny angon-droa fandrefesana, sns sns dia azo raikitra ao anaty angon-drakitra mba hanamora ny fangatahana angon-drakitra ho avy sy ny traceability ny vokatra.